Indlela yokuqonda ubudlelwane obunobundlobongela? ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Uluqonda njani ulwalamano olunobundlobongela. Ubudlelwane obunobundlobongela benzeka xa kukho ukuxhaphaza okanye ukubetha ukuze kulawulwe umntu. Ke ngoko, xa kunokwenzeka, kulungile ukuphuma kubudlelwane obuhlukumezayo kwaye ufune uncedo. UThixo akafuni ukuba uphathwe kakubi.
Ukuxhatshazwa kunokwenzeka kwiindidi ezininzi zobudlelwane: phakathi kwamakhwenkwe, amaqabane, abazali nabantwana, abantakwenu, abahlobo, abantu abasebenza nabo … Ngokubanzi, ezona meko zinzima zibubundlobongela obenzeka ekhaya, phakathi kwamalungu osapho. IBhayibhile iyakugweba konke ukuphathwa gadalala kuba nikela uthando.
Ubudlelwane busebenzela ukunika ukhuseleko, uthando kunye nothando kulowo nalowo. Xa ubudlelwane bujika bubundlobongela nakweyiphi na indawo, umxhaphazi ungcatsha ukuthembela kwalowo uxhatshazwayo. Ukuphathwa gadalala kungcatsha umnqophiso phakathi kwabantu kwaye kusisono.
1 Ungabuqonda njani ubudlelwane obunobundlobongela ngokwebhayibhile
2 Indlela yokusombulula ubudlelwane obunobundlobongela ngokutsho kweBhayibhile
2.1 Sombulula ubudlelwane obunobundlobongela ukuba liqabane lakho
2.2 Indlela yokusombulula ubudlelwane obunobundlobongela ukuba buphakathi kwabahlobo
2.3 Ukuba kuyenzeka emtshatweni wakho
2.4 Sombulula ubudlelwane obunobundlobongela xa ungaphantsi kweminyaka yobudala
Ungabuqonda njani ubudlelwane obunobundlobongela ngokwebhayibhile
Ungaluqonda njani ulwalamano olunobundlobongela Ubudlelwane obunobundlobongela abulandeli imigaqo yothando, imbeko kunye nokunyaniseka, okusisiseko salo naluphi na ulwalamano olusempilweni. Unokuba kubudlelwane obunetyhefu ukuba omnye umntu ulandela ezi patheni zilandelayo:
Te zilawula: Usoloko ugqiba ukwenza le nto ifunwa ngulomntu, naxa uchaza ukuba awufuni.
Sebenzisa ukungcola ngokweemvakalelo: Ukwenza ukuba uzive unetyala ngayo yonke into okanye ukunyanzela ukuba wenze ukuthanda kwakhe.
Yimela kakubi inyani: Inguqulelo yakhe ayihambelani kakuhle kwaye usoloko uliqhawe okanye ulixhoba. Ungaze wenze into ephosakeleyo.
Uyathoba: uyangxolisa, uyathuka, utsho izinto ezihlazo ngawe, ngasese kunye / okanye esidlangalaleni.
Ndiyakuhlasela: ukukubamba kakhulu, ukubetha, ukukhaba, ukutyhala, ukuphosa izinto kuwe okanye eludongeni. Naluphi na uhlobo lobundlobongela ngokwasemzimbeni.
Umntu oxhaphazayo uzihlukanisa yedwa: Akakuthandi ukudibana nabanye abantu okanye ukunxibelelana nabo sele ubazi.
Umhlaseli uyakoyikisa okanye akoyikise: usongela ukushiya wedwa, ukuba akukho mntu uya kukuthanda okanye akuncede, ukuba ngaphandle kwakhe awuyi kuphila, uya kuthatha yonke into kuwe, ukuba uya kukulimaza okanye akubulale, umntu omthandayo okanye ukuba uya kuzibulala.
Ukulawula-Kubonakala ngathi ufuna ukuvunywa kuyo yonke into oyenzayo.
Ukunyanzela ukuba ulale ngesondo: xa uthi hayi, kodwa loo mntu uyakunyanzela. Imalunga ne ukudlwengula kwaye lityala.
Ukuba enye yezi zinto iyenzeka, luphawu lokuba into engalunganga kakhulu kubudlelwane kwaye kufuneka itshintshe. Ukuba uziva udidekile ngale meko, thetha nomnye umntu ngayo. Okukhona ukusondelelana okukhulu, kokukhona kubhideka ngakumbi kubudlelwane obunobundlobongela. I Ukujonga umphambukeli kwingxaki kunokuba luncedo kakhulu.
Indlela yokusombulula ubudlelwane obunobundlobongela ngokutsho kweBhayibhile
Eyona nto ibalulekileyo kukuphelisa ukuxhatshazwa. UThixo akafuni ukuba uphile phantsi kokuphathwa gadalala. Ubudlelwane obuxhaphazayo bunokuba neziphumo ezibi kakhulu kuwe, njengokudakumba, uloyiko, ukuphakuzela, ukuphazamiseka kwengqondo, ukuzithiya, ukugula ngengqondo, ukwenzakala emzimbeni, okanye ukufa kwakho okanye ukufa yomntu omthandayo. UThixo akafuni oku ebomini bakho! Lo ngumsebenzi kaMtyholi.
Sombulula ubudlelwane obunobundlobongela ukuba liqabane lakho
Ukuba ukhona ukuthandana nomntu onogonyamelo, Qhekeza! Akufanele unike iinkcazo. Phuma kulwalamano ngoku, ngaphambi kokuba izinto zibe mbi. Lo ayinguye umntu olungileyo ukuba akutshate. Baleka kule meko.
Indlela yokusombulula ubudlelwane obunobundlobongela ukuba buphakathi kwabahlobo
Ukuba ubudlelwane obunetyhefu benzeka nabahlobo, zama ukunqumla ubudlelwane. Olu ayilohlobo. Ukuba kuyenzeka emsebenzini, jonga ukuba imeko inokusonjululwa na ngobunkokeli kunye / okanye ujonge omnye umsebenzi. Nokuba umsebenzi ohlawula kancinci ungcono kunokuhlala kwimeko enjalo.
Ukuba kuyenzeka emtshatweni wakho
Ukuba uxhatshazo lwenzeka kuwe umtshato, kwiimeko ezingephi, kufuneka jonga ukuba iqabane lakho likulungele na ukutshintsha kwaye lithathe inxaxheba kunyango. Kwimeko ye-ubundlongondlongo okanye isoyikiso, phuma endlwini, kuba lo mntu unokukulimaza okanye abantwana bakho.
Nokuba ayipheli kuqhawulo mtshato, ixesha lokwahlula libaluleke kakhulu. Oku kuya kukunika ixesha lokuphola ekuphathweni gadalala kwaye ubeke izinto ngendlela efanelekileyo. naye Nika umhlaseli ixesha lokuqonda iimpazamo zakhe kwaye avume ukutshintsha ubomi bakhe (kodwa qaphela, oku akunakwenzeka). UThixo ufuna okuhle kwakho, hayi okubi. Musa ukuziva ngathi kufuneka uhlale nomxhaphazi.
Gcina ukhumbula ukuba uxhatshazo lwasekhaya lulwaphulo-mthetho, ke ngoko sicebisa ukuba uxele le meko emapoliseni.
Sombulula ubudlelwane obunobundlobongela xa ungaphantsi kweminyaka yobudala
Ukuba ukhona mncinci, xelela umntu omdala onoxanduva oko kwenzekayo. Ukuba uxhatshazo olo lwenzeka ekhaya, Thetha notitshala omthembileyo, ipolisa, okanye elinye igunya. Awunatyala lokunyaniseka kumxhaphazi, lo mntu akanalungelo lokwenza oko kuwe.
Kuzo zonke ezi meko, ungalibali: UThixo unawe. Ukuba ulixhoba lobudlelwane obuxhaphazayo, Ubulungisa UThixo ungakwicala lakho. Thandaza kuThixo uze ufune uncedo. Ungazikhulula kuxhatshazo, kodwa akufuneki ulwe wedwa. UThixo uya kukunceda.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde indlela yokuqonda ubudlelwane obunobundlobongela kunye nendlela ofanele wenze ngayo ngendlela yobuKristu kule meko. Ukuba ngoku ufuna ukwazi indlela yokukhulisa abantwana bakho ngokweenkolelo zakho zobuKristu, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.